Nhau - Tungamira Fluid Syringe Pump Yezve Electrospinning Uye Chii chinonzi Electrospinning Inoshandiswa
Tungamira Fluid Syringe Pump Ye Electrospinning Uye Chii chinonzi Electrospinning Inoshandiswa
Chii chinonzi electrospinning?
Electrospinning inzira yakapusa uye inowirirana yekugadzirira nanomaterials, iyo inovimba ne electrostatic repulsion pakati pepamusoro mhosva yekuwana inopfuurira nanofibers kubva ku viscoelastic fluids. Parizvino, zvinhu zvakasiyana-siyana zvakabudirira kugadzirira nanofibers nemadimetari akadzika kusvika makumi emanameter ne electrospinning, kusanganisira simbi oxides, organic ma polima, uye zvigadzirwa zvedongo. Kuwedzera kune yakasimba nanofibers ine yakatsetseka nzvimbo, electrospinning zvakare yakakodzera kugadzirira nanostructures ane akakosha morphologies akadai porous, mhango, core-goko kana epakati-sheath zvivakwa. Iyo yepamusoro kana yemukati maanofibers akadaro anogona kuvezve anoshanda nechikamu chechipiri kana nanoparticles panguva kana mushure meiyo electrospinning maitiro. Uye zvakare, electrospun nanofibers inogona kuunganidzwa kuita yakarongedzwa yakarongedzwa kana yakarongedzwa dhizaini nekushandisa kwavo kuronga, kurongedza, kana kupeta, uye electrospun nanofibers ine zvakanakira zvidiki pores, yakakwira porosity, uye yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo. Inoshandiswa munzvimbo zhinji dzakadai sekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuendesa zvinodhaka, matinjiniya uye mushonga wekuvandudza, smart machira, zvinokonzeresa, sensors, kukohwa kwesimba / kushandura / kuchengetedza, biomedicine nezvimwe.
Lead Fluid syringe pombi inoumbwa neyakajeka mota, yekutyaira unit, sikuruu tsvimbo, push block uye yakagadzika bracket, nezvimwe, izvo zvinogona kufamba zvichidzika.
Push block inobatana neiyo pini tsvimbo yesirinji kusunda kana kudhonza iro pisitoni, kuti uone yakakwira-chaiyo, inotsvedzerera uye isina pulsation yemvura kutapurirana.
Tungamira Fluid murabhoritari sirinji pombi yeakakwira magetsi electrospinning, Tungamira Fluid yepamusoro-yakanyatsojeka murabhoritari sirinji pombi inogona kuve yakagadzirirwa nesirinji inokwana 10L kusvika 60 mL. Iyo ine 1, 2, 4, uye gumi makwara ekusarudza kubva, ichiwana imwechete chiteshi kuyerera renji ye0.84nl / min-83ml / min. Yakadzikama hutachiwana.
Yakakurudzirwa reference modhi:
TYD01-01, imwechete chiteshi sirinji pombi
TYD01-02, miviri nzira syringe pombi
TYD03-01, yakanyanya kunyatsoita imwechete chiteshi sirinji pombi
TYD02-10 （gumi chiteshi sirinji pombi)
Iyo laborotary syringe pombi inogona kuunganidza hwakasiyana saizi yesirinji, sarudza akasiyana maitiro maitiro maererano nezvinodiwa.
Yakakwirira resolution color LCD inoratidzira, inobata skrini yekushanda iri nyore uye nekukurumidza seti paramita.
Magetsi akawanda anoratidza zvakajeka mashandiro ayo, uye akasiyana sirinji yakavakirwa-mukati iri nyore kusarudza vatengesi uye kudomwa.
Prestore multigroup yedata kusangana nezvinodiwa zvekuyedza kwakasiyana kwekuyedza.
Iyo zvakare ine yakakwirira chaiyo yekudzivirira uye yekuchengetedza vamiririri uye maalarm mashini.
Tsigira RS485 kutaurirana, inowirirana neMODBUS protocol, uye inogona kugadzira otomatiki kudzora system nemakomputa, PLCs, uye imwechete-chip makomputa.
Yakazara simbi bhachi, rakapamhama rakasiyana simba rekuisa, chinja kune akasiyana zviitiko.
Iyo inoshandisa micro fluid vhoriyamu kutapurirana, micro kuyerera kutapurirana, hapana kupomba kufambisa.
Chii chinonzi electrospinning chinoshandiswa?
Mumakore achangopfuura, nekuenderera mberi kwakadzika-kutsvagisa pamusoro pesimba remagetsi, tekinoroji yeelectospinning yakagamuchira kutariswa mune dzakawanda nzvimbo dzekutsvagisa, kunyanya mune zvebiomedicine, kuchengetedza simba, kuchenesa kwezvakatipoteredza uye catalysis. Electrospinning Nekuda kwezvakawanda zvayakanakira, tekinoroji yakave zvishoma nezvishoma tekinoroji yakakosha yekugadzirira imwechete-mativi nanomaterial. Kushanda mumunda wehutongi hwezvakatipoteredza, electrostatic nanofibers ave achishandiswa zvakanyanya mukurasa tsvina, kuchenesa mweya uye filtration yehupenyu, nezvimwewo Zvishandiso zvemishonga, iko kushandiswa kwe electrospinning mukutakura zvinodhaka kunyanya kunosanganisira anti-kupisa, anti-oxidant, anti-bundu, uye zvinoshanda zvinoshandiswa zvechinyakare Chinese mushonga.
Baoding Lead Fluid Technology Co, Ltd. inotarisana nedhizaini, kuvandudza, kugadzira uye kushambadzira kwepombi dzemapombi uye mapombi ejekerere, uye yakazvipira kupa vashandisi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakakwana zvehunyanzvi masevhisi. Kuwedzera pakuve neakakwana kwazvo akateedzana emapombi eperistaltic uye sirinji pombi yechigadzirwa mitsara, Lead Fluid inogona zvakare kupa OEM yakagadziriswa masevhisi zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Lead Fluid yakakwana uye yakakura chigadzirwa chigadzirwa ruzivo inogona kukupa iwe nekukurumidza kunyorera kunongedzera uye mazano eperistaltic mapombi uye sirinji pombi, uye kupa vashandisi vane yepamusoro-soro, yepamusoro-chaiyo, uye inodhura-inoyerera yekuchinjisa mvura mhinduro.
Post nguva: Jun-02-2021